Macalimiinta Dalka Kenya oo mar kale shaqa joojin ku hanjabay. | Starfm.co.ke	Sunday, May 19th, 2013	Home
Macalimiinta Dalka Kenya oo mar kale shaqa joojin ku hanjabay.
Published on August 20, 2012 by Sacdiya Garabey · No Comments
Share20.Aug.2012;- Macalimiinta dalka ayaa mar kale soo saaray 7 maalmood oo ay u qabteen gudiga adeega macalimiinta in ay ku fuliyaan waxyaabihii ay dowlada kula heshiiyeen.
Ururka ay ku bahoobeen macalimiinta dalka ee loo soo gaabiyo KNUT ayaa waxa ay sheegeen in hadii ay dowlada ku guul daraysato dhaqan galinta heshiiskii ay la galeen 1997-dii kaasi oo mushaarka iyo gunada loogu kordhinayay in macalimiinta ay shaqa joojin ku dhaqaaqi doonaan.
Xoghayaha guud ee KNUT David Okuta ayaa waxa uu sheegay in macalimiinta aysan iskuulada aadi doonin 3-da bisha september xiligaasi oo termka sadaxaad la furayo iskuulka.
Mr Okuta ayaa waxa uu farta ku fiiqay in ay dowlada iska indha tirayso dhaqan galinta heshiisyadii ay macalimiinta la galeen.
Ururka ay ku bahoobeen macalimiinta dalka ayaa waxa ay ka doonayaan gudiga qaran ee adeega macalimiinta in macalimiiinta mushaarka loo kordhiyo boqolkiiba 300% islamarkana gunada loo kordhiyo.
Macalimiinta ayaa ku dooday in dowlada luuqada kali ah ee ay fahmayso ay noqotay shaqa joojin islamarkaana ay taasi miciin bidayaan.